Report Belmont ayaa ku dooday in mabda'a Raxmaan waa waajib ku ah in cilmi u leeyihiin in ay ka qaybgalayaashu, iyo in ay ku lug leedahay laba qaybood: (1) ma yeeli iyo (2) kordhiyo gargaarka ay suurtogal tahay iyo in la yareeyo waxyeellooyinka ay suurtagal tahay. Report Belmont bixisay fiidda fikradda ah "ma yeeli" xeerkii Hippocratic ee anshaxa caafimaadka, iyo waxa lagu sheegi karaa foom xoog meesha cilmi "waa in aan dhaawac hal qof loo eegin faa'iidada ah in dadka kale imaado" (Belmont Report 1979) . Si kastaba ha ahaatee, Report Belmont ayaa sidoo kale qiray, in barashada waxa faa'iido laga yaabaa in ku lug tiriska dadka qaar si halis. Sidaa darteed, lagama maarmaan ah ay ku qaban karaan waxyeello ma noqon kartaa in khilaafka la lagama maarmaan ah si ay u bartaan, taasoo keentay cilmi inaad gaadhid go'aamo mararka qaarkood way adag tahay oo ku saabsan "marka ay tahay marka labarbar dhigo si uu u doondoono faa'iidooyinka qaarkood inkastoo khataraha ku lug leh, iyo marka gargaarkii ahaa in la foregone sababta oo ah khatarta. " (Belmont Report 1979)
In dhaqanka, mabda'a Raxmaan ayaa loo tarjumtey in ay ka dhigan tahay in cilmi waa qaataan laba hannaan oo kala duwan: falanqayn halista / lacagta ka dibna go'aan ku saabsan in khataraha iyo faa'iidooyinka ay isugu dheeli tiran anshaxa ku haboon. Marxaladani waxay ugu horeysay inta badan waa arrin farsamo u baahan khibrad dhab ah, iyo kii labaad inta badan waa fuli sida anshaxa meesha khibrad dhab ah waxaa laga yaabaa in ka yar qiimo leh ama xataa dhaawici.
Falanqaynta halista / lacagta A ku lug fahamka iyo hagaajinta khataraha iyo faa'idooyinka daraasad labadaba. Falanqaynta of khatar in ay ku jiraan laba cunsur: itimaalka dhacdooyin xun iyo darnaanta dhacdooyinka kuwa. Inta lagu jiro marxaladdan, tusaale ahaan, cilmi baare qabsato yaabaa design waxbarasho si loo yareeyo itimaalka dhacdada xun (sida, xulatid ka qaybgalayaasha u nugul yihiin) ama loo yareeyo darnaanta dhacdo xun haddii ay dhacdo (tusaale, ka dhigi talinta heli karo si ka qaybgalayaasha ku codsato). Dheeraad ah, inta lagu guda jiro nidaamka this cilmi u baahan tahay in ay sii saameynta ay shaqadooda kaliya ma ahan ee ka qaybgalayaasha, laakiin sidoo kale on non-qayb-galayaasha iyo hababka bulshada ku hay. Tusaale ahaan, ka fiirso tijaabo ah by Restivo iyo van de Rijt (2012) oo ku saabsan saamaynta abaalmarinta on tifaftirayaasha Wikipedia (hadlay Cutubka 4aad). In tijaabo this, cilmi abaalmarinta siiyey tifatirayaasha qaar ka mid ah si ay u tixgeliyo mudan dibna dabagal kaalintii ay ka Wikipedia marka la barbar dhigo kooxda ay gacanta ka mid ah tifaftirayaasha siman mudan kan cilmi ma siin abaalmarinta. In daraasaddan gaar ah, tirada abaalmarinta ay bixiyeen waxay ahaayeen yar, laakiin haddii cilmi ayaa daadadku Wikipedia la abaalmarinta waxa ay khalkhal yaabaa bulshada ee tifaftirayaasha aan yeesho wax kasta oo iyaga ka mid ah si gaar ah. In si kale loo dhigo, marka ay qabanayaan falanqaynta halista / lacagta waa in aad u malaynayso oo ku saabsan saamaynta shaqadaada ma ahan oo keliya ka qaybgalayaasha laakiin on dunida ka sii weynba.
Next, mar khataraha ayaa la yareeyo iyo faa'iidooyinka gaarsiiyaa, cilmi waa in la qiimeeyo in daraasadda ku dhufto dheelitirka wanaagsan. Ethicists ha ku talinaynaa summation fudud ee qarashka iyo faa'iidooyinka. Gaar ahaan, halista qaar ka abaalmarin cilmi impermissible iyadoo aan loo eegayn faa'iidooyinka (tusaale ahaan, Syphilis Tuskegee ka Study lagu sharaxay lifaaqa Historical ah). Si ka duwan falanqaynta halista / faa'iidada, taas oo inta badan farsamo, taas oo tallaabo labaad waa si qoto dheer anshaxa iyo waxaa laga yaabaa in xaqiiqda la barwaaqaysiin by dadka aan haysan khibrad maado-banaan gaar ah. Dhab ahaantii, maxaa yeelay, kuwa dibadda ah inta badan wax ka duwan aragto ka dhuun, IRBs ee dalka Mareykanka waxaa looga baahan yahay in ugu yaraan mid ka mid ah non-cilmi-leeyihiin. In aan waayo-aragnimo u adeegaya on IRB ah, kuwa dibadda ah, kuwaas oo noqon waxtar u leh ka hortagga group-ka fikiri kartaa. Sidaas darteed haddii aad dhibaato la go'aaminayo in mashruuc cilmi-baaris aad ku dhufto falanqayn halista / lacagta ku haboon ma weydii kaliya asxaabtaada, isku day waydiinaya-cilmi aan, jawaabahooda aad la yaab yaabaa in.
Dalbashada mabda'a Raxmaan saddexdii tusaalooyin muujineysaa xaqiiqda ah in uu jiro inta badan waa la hubin la taaban karo oo ku saabsan khatarta ka hor daraasad bilaabmaa. Tusaale ahaan, cilmi, ma aan ogayn itimaalka ama magnitude dhacdooyinka xun sabab u noqon karaan waxbarashadooda. hubin Tani dhab ahaantii waa wax caadi ah in cilmi da'da digital, oo goor dambe oo cutubkan, sooci doonaa qaybta oo dhan inay caqabad ku ah go'aan qaadashada in wejiga la hubin (Qaybta 6.6.4). Si kastaba ha ahaatee, mabda'a Raxmaan ma soo jeedinaayaan isbedel qaar ka mid ah laga yaabo in lagu sameeyo waxbarashada, kuwaas oo si loo hagaajiyo ay dheelitirka halista / lacagta. Tusaale ahaan, in cudurkeenaha Qiirada, cilmi ah ayaa isku dayay yaabaa in xulatid dadka ka yar 18 sano jir iyo dadka ahaan gaar ahaan ay u badan tahay in ay si xun u dhaqmayso daaweynta laga yaabaa. Waxay sidoo kale isku dayay in laga yaabaa in la yareeyo tirada ka qaybgalayaasha iyadoo la isticmaalayo habab tirakoobka hufan (sida ku cad si faahfaahsan cutubka 4). Dheeraad ah, ay isku dayday laga yaabaa in lala socdo ka qaybgalayaasha iyo bixiyaan gargaar qof in u muuqday in ay soo gaartay. In dhadhamiya, Xiriirka, iyo Time, cilmi ku gelin kara ilaalinta dheeraad ah meel markay sii daayay xogta (inkasta oo habka ay ansixiyeen Harvard ee IRB taas oo muujinaysa in ay ahaayeen waafaqsan dhaqanka caadiga ah waagaas); Waxaan kuu soo bixin doonaa qaar ka mid ah talooyin gaar ah oo ku saabsan sii deynta macluumaadka qaybaha danbe markii aan ku tilmaami halis macluumaad (Qaybta 6.6.2). Ugu dambeyntii, in Encore, cilmi ah ayaa isku dayay laga yaabaa in la yareeyo tirada codsiyada khatar la abuuray si loo gaaro gool cabbirka mashruuca, oo ay saaray yaabaa qaybgalayaasha in ay yihiin kuwa ugu khatar ka dawladaha cadaadis. Mid kasta oo ka mid ah isbedel suurto gal bilaabi lahaa ganacsi-offs galay design ka mid ah mashaariic kuwan, oo aan gool ma aha oo muujinaya in cilmi-waa in ay dhigtay isbeddeladaa. Saas ma aha, hamigeyga waa in ay muujiyaan noocyada isbedel in mabda'a Raxmaan soo jeedin kara.
Ugu dambeyntii, inkastoo da'da digital ayaa guud ahaan ka dhigay oo miisaankeedu yahay ee khatarta iyo faa'iidada badan oo adag, waxa uu si dhab ah u sahlay cilmi in la kordhiyo faa'iidooyinka shaqadooda. Gaar ahaan, qalabka da'da digital aad bay u fududeeyo cilmi furan oo la sawiran karaa, halkaas oo cilmi ay macluumaadka cilmi baadhista iyo code la heli karo si cilmi-kale oo ka dhigi waraaqaha ay heli karo si ay dadweynaha, iyagoo soo daabacay furan. Isbeddelkan in la furo iyo cilmi la sawiran karaa, halka by jirin loola jeedaa fudud, waxay bixisaa qaab ay cilmi-in la kordhiyo faa'iidooyinka ay cilmi oo aan ku tiriska qaybgalayaasha in ay khatar kasta oo dheeraad ah (la wadaago xogta waa marka laga reebo in laga wada hadli doonaa si faahfaahsan ee qaybta ku saabsan macluumaadka khatarta (Qaybta 6.6.2)).